That's so good, right?: Apartment
အခြားလူအချို့နဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုစုငှားနေဖြစ်ခဲ့သော လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်သောကာလကအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းက လူအနည်းစုကတော့ ကျွန်တော်ဟာ bisexual တစ်ယောက်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ။
ကျွန်တော်က ကျောင်းမပြီးသေးပါဘူး တက္ကသိုလ်ကို နေ့ကျောင်းတက်တဲ့အပြင် အားလပ်ချိန်များမှာ အပြင်သင်တန်းအချို့ကိုလည်း တက်နေခဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ကျောင်းမသွားသေးခင် သင်တန်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ အခန်းဝယ် အေးအေးဆေးဆေး တစ်ကိုယ် တည်းနှပ်နေလို့ရတယ်ဗျ။ အခန်းမှာ တစ်ယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာက အကုန်လုံးလိုလိုက အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲမို့ပါ။ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း သိပ်မသိတတ်တဲ့ အခန်းဖော်တွေနဲ့က ကျွန်တော်က တစ်ဘာသာ။ တစ်ရက်သား…..
`ဟူး´ မနက်စောစောစာကြည့်ရတာ အိပ်ငိုက်လိုက်တာ သင်တန်းကလည်းမသွားရ Gym ကလည်း ညနေပိုင်းမှကစားမှာဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ရေချိုးပြီး ရှိုင်းဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ အ၀တ်တွေအကုန်ချွတ် တဘက်လေး ခါးမှာပတ်ပြီးရေချိုးခန်းထဲဝင် Shower အောက်ငုံ့ကာ ခလုပ်ဖွင့်တော့ ရေပူခလုပ်နဲ့မှားဖွင့်လိုက်တာကြောင့် ပူကနဲဖြစ်သွားရရော။ အဲဒါကြောင့်ရေအေးခလုပ်လေးနှင့်မျှဖွင့် တော့မှ အေးဆေးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်ရပါတယ်။ အိမ်ရှေ့ခန်းတံခါးဖွင့်ပြီး တံခါးရွက်ပြန်ပိတ်သံ ကြားလိုက်ရသည်နှင့်မရှေ့ မနှောင်းမှာပဲ ကိုဇော်ရဲ့အော်သံကိုကြားရရော `ဟေး….အိမ်မှာတစ်ယောက်ယောက်ရှိနေလား? ကောင်လေး မင်းလား?´
ရေပန်းကိုဖွားဖွှားကျအောင်ဖွင့်ပြီးချိုးနေရင်း ပြန်အော်ပြောလိုက်တယ်။ `ဟုတ်တယ်ဗျ….ကျွန်တော်ရေချိုးနေတယ်´ ဘာတုန့်ပြန်သံမှ မကြားရပါဘူး။ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်အကြာမှာ ရေချိုးခန်းတံခါးရုတ်တရက်ပွင့်လာပြီး ကိုဇော်ဝင်လာရော။ ကျွန်တော့်မှာ တန်းပေါ်က တဘက်ကိုလှမ်းဆွဲယူလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်အောက်ပိုင်းကို ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ရပါတယ်။ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ အကုန် လန်းနေတာဆိုတော့ မနည်းတဘက်နဲ့ဖိထားရတာပါပဲဗျာ။
`သေးပေါက်မလို့ ငါ့ကောင်´တဲ့သူက ကျွန်တော့်ဘက်ကိုမကြည့်ဘဲပြောတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ ဒီဘက်ကိုမရှိုးတာ။ သူ အိမ်သာ ကြွေကမုတ်ရှိရာကို မျက်နှာမူထားရင်း သူ့ဘောင်းဘီခါးပတ်ဖြုတ်တာ၊ ဇစ်ဖွင့်တာတွေကို မကြာခင်မှာပဲကြားရတယ်။ သူသေးပေါက် တာကိုစောင့်နေတာ သူက သေးစမပေါက်သေးဘူးငြိမ်နေတာဗျ။ သူ့ခါးကဘောင်းဘီက တဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုလျှောကျလာတော့ တင်ပါးအကွဲကြောင်းလေးကို မို့ဖောင်းနေတဲ့တင်နှစ်မွှာအထက်ပိုင်းကြားမှာမြင်လာရတယ်။ သူ ဒီနေ့အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်မထားဘူး ဗျ။ အာ….ဖြူဖွေးနေတဲ့ သူ့တင်သားအစပ်လေးကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ရင်တွေခုန်လာတယ် ပြီးတော့ အမွှေးနုလေးတွေရှိနေတာ အသည်းယားစရာ။
စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိ သူသေးပေါက်သံမကြားရသေးဘူး ကိုင်ပြီးရပ်နေတဲ့အနေအထားအတိုင်းပဲ။
သူ ဒီအတိုင်း ကျွန်တော့်ဘက်ကို လှည့်လာတယ်ဗျ….ပျော့နေဆဲ့သူ့ငပဲကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လျက် မျက်နှာမှာလည်း မချိုမချဉ်အပြုံးနဲ့။ ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ ရှော့ခ်ရသွားပြီး လှုပ်ရှားမှု နေရရွှေ့မှုမလုပ်ဖြစ်တော့။ သူ့ငပဲက အနည်းဆုံး ၆လက်မခွဲကျော်လောက်တယ် ပျော့နေတာတောင်လေ ပြီးတော့ တုတ်လည်းတကယ်တုတ်တယ်။ နံရံကိုကျောကပ်ထားရင်းရေပန်းဖွှားဖွှားအောက်မှာ ခပ်ရွံ့ရွံ့ရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ရှိရာကို သူတိုးလာပြီး ကျွန်တော့်ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကျော်လို့နံရံကိုလက်ထောက်လိုက်ရော။ သူ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ကာ သက်ပြင်းချသံခပ်ကျယ်ကျယ်ဖြစ်အောင်ချတယ်။ ရေအလျဉ်ဟာ ကျွန်တော့်ခေါင်းပေါ် ရင်အုပ်တွေပေါ် ဗိုက်ကြွက်သား များပေါ် ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားကျဆင်းနေဆဲမှာ ကျွန်တော့်ခြေအစုံနားက ဆပ်ပြာမြုပ်ရေတွေကြား အ၀ါရောင်အရည်တွေကျအောင်သူလုပ် တာ နွေးနေတဲ့ခံစားမှုကိုရရှိပါရဲ့။ ကျွန်တော်အစကတော့ သူ့ကိုတွန်းထုတ်ပြီး အဝေးကိုထွက်ခွာသွားမလို့ပါ..ဒါပေမဲ့ ရေချိုးလက်စ တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင် အေးစက်နေတဲ့ကြွေပြားနံရံကိုကျောကပ်လျက်သားဖြစ်နေတယ်။ သူရုတ်တရက် ကျွန်တော့်ကိုတွန်း လိုက်တာ ကြမ်းပြင်ဝယ်ဖင်ထိုင်ရက်ကျသွားတော့ သူ ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်မောရင်း ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ အ၀ါရောင်အရည် တွေနဲ့ ပန်းတော့တာပါပဲ။ `မင်းကြိုက်မှန်းငါသိပါတယ်ကွာ….ဒီတော့ မင်းပါးစပ်ကိုဖွင့်လိုက်….ညစ်ပတ်နေတဲ့ ငါ့-ီးရဲ့အရသာမင်းကို ကျွေးမလို့´
တကယ် တကယ့်ကို ရှော့ခ်ပိုရိုက်သွားပါတယ်။ သူအရင်က ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ စကားမစသလို အထာလည်းမပေး စိတ်ဝင်စားဟန်လည်းမပြတတ်သူလေ။ ကျွန်တော် ခေါင်းတခါခါနဲ့ ငြင်းဆိုပေမယ့် ဘာစကားမှမဟရသေးခင် သူ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို လက်သီးနဲ့တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ပစ်ထိုးလိုက်တော့ ကြယ်တွေလတွေတောင်မြင်သွားသလိုဖြစ်ရပါတယ်။ `မင်း….ငါခိုင်းတာကို လုပ်စမ်း -ာသည်မ´ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထိုးကြိတ်ပြန်ရော။ ကျွန်တော် ဘာမှ မတုန့်ပြန်နိုင်ပဲ စကားခွန်းဆိုဖို့ ပါးစပ်ကို ဟလိုက်မိစဉ် ဘာမှမပြောရသေးခင်မှာ နောက်တစ်ကြိမ် ပူနွေးတဲ့အ၀ါရောင်အရည်တွေကို ပန်းထည့်ပြန်တယ်။ ကျွန်တော့် မျက်နှာအနှံ့ရယ် ပါးစပ်ထဲကို ၀င်တစ်ဝက် စင်တစ်ဝက်ပေါ့ဗျာ။
စူးရှရှ နဲ့ ငံကျိနေတဲ့အရသာကို တစ်ပြိုင်တည်းလိုခံစားရပါတယ်။ မသိစိတ်က ဆုံးဖြတ်ရရင် ကျွန်တော်ဒီလိုပြုမူခံနေရတာကို တကယ် ကြိုက်နေတာပဲ။ သိစိတ်ကတော့ သူတစ်ပါးက ရိုင်းစိုင်းစွာပြုမူနေတာကို မငြင်းဆန်မိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းစိတ်ဝင်မိသလားလို့။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ပြည့်လျံနေတော့ သည်းသလိုဖြစ်သွားကာ အကုန် ဖိတ်စင်ကုန်ရပါတယ်။ သူ အဲဒါကိုမြင်တော့ နှစ်လိုအားရစွာ ပြုံးတယ်..``ငါသိတာပေါ့ ဒီလိုလုပ်တာကို မင်းကြိုက်မယ်ဆိုတာ စောက်ခြောက်´´။ သူ ပန်းထုတ်တာတွေ အရှိန်သေစပြုလာချိန်မှာ ကျွန်တော့်အနားကပ်လာပြီး ဆံပင်တွေကိုဆွဲကာ သူ့အနားကိုတိုးစေပါတယ်။ နောက်ဆုံးသော အ၀ါရောင်အရည်အချို့ဟာ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်အစုံက အမွှေးနုများကြား အားရပါးရခုန်ဆင်းသွားကြရော။
သူ ခပ်ကျယ်ကျယ်အသံထွက်သည်အထိ သက်ပြင်းချလိုက်ရင်း `ရှီး….ငါအဲ့လိုလုပ်ချင်နေတာကြာလှပြီကွ´တဲ့။
မရှည်တရှည် ဆံနွယ်တွေကို သူဆွဲကိုင်ထားသလို….အနံ့အသက်ပြင်းပြင်း အ၀ါရောင်အရည်တွေကြား ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်နေမိ သည့်အခြေအနေမှာ ခဏတော့ကြာတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကိုစုဆွဲကိုင်ပြီး သူ့ပေါင်ခြံကိုမျက်နှာအပ်ခိုင်းရင်း မျက်နှာအနှံ့ ရှည်လျားလှသော အသားချောင်းကြီးနဲ့ တဘတ်ဘတ်ရိုက်သေး။ သူ့ငပဲထိပ်ဝက အရည်စိုတွေက မျက်နှာကိုသာမက နားရွက်တွေကို ပါစိုစွတ်စေသေး။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေရော ကိုယ်တွေရော တစ်ကိုယ်လုံးပူထူနေသလိုပဲ ရှက်စိတ်တွေမွှန်လာတယ်….ပြီးတော့ သူက ကျွန်တော့်ထက် ထွားကြိုင်းနေတော့ ပြန်လုပ်ရင်လည်း နာမှာသိတာကြောင့် သူ့အမိန့်အတိုင်း တကယ်လိုက်လုပ်နေဖြစ်ရတာကို လန့်လာတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား ဘာမှဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘဲ ခဏတော့ ငြိမ်သက်သွားကြသေးတယ်….ပြီးတော့မှ အေးစက် သော ကြွေပြားခင်းကြမ်းပြင်ပေါ် တွန်းလှဲချရင်း ဆံပင်တွေကိုဆွဲကိုင် မျက်နှာကို အ၀ါရောင်အရည်တွေရှိရာကိုအပ်စေရင်း မဟုတ်တာ တွေလုပ်ခိုင်းပါတယ်။ အသန့်ကြိုက်သော ကျွန်တော့်အဖို့ ပါးစပ်က အစာဟောင်းတွေ အေ့ာအံထွက်မိမတတ်ခံစားရပါရဲ့။
ကျွန်တော် ဘာမှဆက်မလုပ်မလှုပ်ရှားဘဲနေတော့ သူ ကျွန်တော့်နံဘေးကိုပစ်ကန်တယ် လျစ်ကနဲပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို အိမ်သာ ကမုတ်ကိုဆေးသော ဘရပ်ရ်ှတံဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်ခတ်ပါရော။ အနီရောင်အရှိုးရာတွေထင်းကနဲ ထင်းကနဲဖြစ်လာတဲ့အထိ ရိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေဝယ် အနီရောင်အရှိုးရာတွေထပ်နေသလို ကျွန်တော့်နံဘေးသည်လည်း အောင့်နေရော။ နောက်ဆုံးတော့မှ စိတ်ညစ်ရခြင်းတွေ နည်းနည်းအဆုံးသတ်ရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကို စုကိုင်ပြီး အပေါ်ကိုမော့စေပြန်ရဲ့။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို သူ့လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ ဖြန်းဖြန်းမြည်အောင်ရိုက်လိုက်သေးတယ် ပြီးမှ သူ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးမတ်တပ်ရပ်ဖို့ ခိုင်းတယ်လေ။
အိုး…..သူသည်လည်း အ၀တ်တွေမရှိ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ သူ့ပေါင်ကြားက ငပဲကြီးကလည်း အမြှောက်တစ်ခုချိန်ထားသလို မာတောင့်ပြီး တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတာနဲ့ မျက်နှာမှာလည်း ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ရမှန်းမသိတဲ့အပြုံးတစ်ခုနဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကျောပြင်ထဲက စိမ့်ကနဲနေအောင် ကြောက်စိတ်ဝင်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ သူ ကျွန်တော့်ကို -ိုးတော့မယ်။ ဒီအချိန် ဒီအချိန်လေးမှာ တခြားအခန်းဖော်တွေပြန်လာပါစေလို့ မျှော်လင့်မိပါရဲ့ဗျာ။
ငြိမ်သက်မိသော ကျွန်တော့်ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို သူ့လက်ပြန်ရိုက်ချက်တွေ ရောက်လာသလို အော်ဟစ်သံကိုလည်း ကြားရပါတယ်။ `မင်း ဘာကြည့်နေတာလဲကွ? အခု ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ငါ့ခြေထောက်တွေကို နမ်းစမ်း´ ကျွန်တော် တစ်ချက်လောက် အနမ်းပေးလိုက်ပြီးနောက် ဧည့်ခန်းထဲကို သူ့နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ဖို့ အမိန့်ပေးရော။ အေးစက်နေတဲ့ လေတွေကို အ၀တ်မဲ့ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရစ်သိုင်းလာ သည်မို့ ခိုက်ခိုက်တုန်လာရပါတယ်။ ရိုက်နှက်မှုခံရသောနောက်ဝယ် လိုက်ပါလုပ်ဆောင်မိသောအဖြစ်များပါပဲ။
`နွဲ့မနေစမ်းနဲ့ကွာ…ငါရိုက်လိုက်ရ´သူ အော်ဟစ်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တုန်သွားမိတယ်။ သူက ထွားကြိုင်းသန်မာသူဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်က ဖြူဖြူ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်ကိုး။ ထူးဆန်းတာက ကျွန်တော့်ငပဲကမာတောင့်နေသလို သူ့ငပဲသည်လည်း မာထန်နေဆဲ။ ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့ သူပြန်မလာမချင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလှဲနေဖို့အမိန့်ပေးပြန်တယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်း လေးငါးမိနစ်လောက် ကျွန်တော်နေနေစဉ်မှာ သူအခန်းထဲပြန်ဝင်လာတယ်။ `လိမ္မာသားပဲ ငါ့ကောင်က….ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်သား။ မရွေ့နဲ့နော်။ မင်းကို ငါပြုစုမလို့ပါကွ´ သူ ကျွန်တော့်ဆီလျှောက်လှမ်းလာပြီးနောက် ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကိုအ၀တ်စရှည်တစ်ခုနဲ့ဘာမှ မမြင်ရ အောင်စည်းနှောင်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အနားကနေ လှမ်းထွက်သွားပြန်ရော။
ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့ သူပြန်လျှောက်လာသံကိုကျွန်တော်ကြားရပြန်တယ်။ သူ ကျွန်တော့်ခြေထောက်ကနေဆွဲတော့ နည်းနည်း ရုန်းမိတာကြောင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုတစ်ချက်အရိုက်ခံလိုက်ရသလို ကျွန်တော့်ဗိုက်ကို တစ်ချက်လောက်အထိုးခံလိုက်ရပြီး ဆိုဖာပေါ်ကို တွန်းလှဲခံရရော။ ကျွန်တော် အံ့သြသွားရသလို သူဘာတွေလုပ်တော့မလဲဆိုတာ စိုးရိမ်စပြုလာရပါပြီ။ ပြီးတော့ ဒီအချိန်မှာ အခန်းဖော်တစ်ယောက်ယောက်ပြန်လာမှာကိုလည်း စိုးရိမ်လာရပါတယ်။ ဆိုဖာပေါ်မှာ ဘာမှမမြင်ဘဲ ထိုင်နေရပြန်တော့ သူ ကျွန်တော့် လက်တွေကို နောက်ပြန်အနေအထားနဲ့ကြိုးဆွဲချည်ပြန်ရော။ လက်တွေကိုတင်းနေအောင်ချည်တော့ တော်တော်နာကျင်ရပါတယ်။ အာ….တစ်ခုခုနဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီကို ဖိကပ်လာသလားပဲ။ တော်တော်ကြီးပြီး နွေးနေသလိုပဲ…..အလယ်ပိုင်းလောက်က ကောက် ကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့။ အိုး……ဒါ…..ဒါ သူ့တင်ပါးဆိုင်ကြီးပါလား။ ကျွန်တော့်မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်မှာဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ မလှုပ်ရှား နိုင်ခဲ့။ အသက်တစ်ရှိုက်ဝယ် အနံ့အသက်တွေက ရွံရှာစဖွယ် ချွေးနံ့တွေ သူ့ကိုယ်နံ့ခပ်ပြင်းပြင်းတွေရလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် မလွတ် မြောက်နိုင်တော့။ `ဟား ဟား….မင်းကြိုက်မယ်ဆိုတာလောင်းရဲတယ်…..ကြိုက်တယ်မဟုတ်လား စောက်ခြောက်…..မင်းကိုငါ သောက်ရမ်း-ိုးချင်နေတာ´ ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်လိုမှပြန်မဖြေနိုင်ခဲ့ပါ။ `ဟေ့ကောင်…..ငါဖင်ဝတွေအကုန်သန့်ရှင်းအောင် လျက်စမ်းကွာ´ ပါးစပ်ကလည်းပြော သူ့တင်ပါးအကွဲကြောင်းကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းရှိရာစီဖိကပ်ပေးပါရဲ့။
သူ့ခရေ၀က အမှန်တကယ်တော့ သန့်ရှင်းနေပြီးသားပါ ချွေးနံ့နဲ့ ကိုယ်နံ့ပြင်းပြင်းကလွဲလို့ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်….ကျွန်တော့် လျှာနဲ့ ထိတွေ့နိုင်တဲ့ နေရာမှန်သမျှကို လျှာမုန်တိုင်းမွှေရပါတယ် သူရွှေ့ပြောင်းတဲ့ ထိတွေ့ပေးတဲ့ သူ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုပေါ့။ ကျွန်တော့် လျှာဖျားကို ခပ်စုစုလုပ်ချွန်ပြီး သူ့ခရေ၀ထဲကို ဖိသွင်းဖို့ကြိုးစားတော့ သူ့ဖင်ကို ရုတ်သိမ်းသွားပြီး ကျွန်တော့်ပါးကိုဖြန်းကနဲ နေအောင်ရိုက်တယ်ဗျာ။ သူ ကျွန်တော့်ချိုင်းကနေဆွဲမပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ဝယ် လေးဖက်ထောက်ခိုင်းပြန်တယ်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ကိုဟခိုင်းပြီး နောက် သူ့ရဲ့ရှည်လျားလှတဲ့ငပဲကြီးကို ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲထိရောက်အောင် ဖိသွင်းပါရော။ အသက်၀၀ရှူဖို့အချိန်တောင် ကျွန်တော် မရလိုက်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲကိုလျောကနဲ တနင့်တပိုးဝင်သွားတာကြောင့် သီးသလိုဖြစ်သွားပြီး သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ် ထဲကနေ ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သူ ကျွန်တော့်ဗိုက်ကို လက်သီးနဲ့လှမ်းထိုးရော….အာ…..နောက်တစ်ခါ အဲ့လိုမလုပ်မိဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးရပါရဲ့။ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲအပြင် အာခံတွင်းကိုဖြတ်ကာ လည်မျိုထဲထိ အထုတ်အသွင်းခပ်ကြမ်းကြမ်းသူဆက်လုပ်တယ်။ ဘယ်လိုကြီးလည်းမသိပါဘူးဗျာ…..အေးစက်စက်ကြမ်းပြင်ပေါ်ဝယ် အခင်းအပြုမပါ လေးဖက်ထောက်ထားရတဲ့အနေအထား…. ကိုယ်လက်တွေကလည်း သူထုထောင်းထားလို့နာနေပြီ။ ဒါပေမဲ့….အာ…သူ့အနှိုးအဆွတစ်ချို့ကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်တွေရူးသွပ်နေ သလိုပါပဲ မပြောတတ်တော့ဘူး။ ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်နေတဲ့ငပဲရဲ့သွေးကြောတစ်ချို့တဆတ်ဆတ်ခုန်လာတာကြောင့် မကြာခင်သူ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ သုက်ရည်တွေပန်းထည့်တော့မယ်လို့ ခံစားရမိစဉ်မှာပဲ သူ့ငပဲကြီးကို ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲကနေဆွဲထုတ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပါးပြင်ပေါ်ကို ငပဲကြီးနဲ့ တဖတ်ဖတ်ရိုက်ပြန်ရော။
`ရှီး….မင်း လည်မျိုထဲထည့်ရတော သောက်ရမ်းကောင်းတယ်… .ပြီးတော့မလို့….မင်းခပ်ကြမ်းကြမ်း-ုပ်ပြုတာ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ။ နောက်တစ်ကြိမ် လုပ်ဖြစ်ကြရင် အဲဒါကိုပဲမင်းကိုလုပ်ခိုင်းတော့မယ်´
နောက်တစ်ကြိမ်? နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုတာ ရှိဦးမှာလား….အာ…မပြောတတ်တော့ဘူး ကျွန်တော့်ကြောပြင်အနှံ့တဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ကြက်သီး တွေထသွားသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်ပါးပြင်လေးတွေကို သူ့လက်နဲ့ တဖျက်ဖျက်ရိုက်ခတ်လိုက်ပြီးနောက် သူ မတ်တပ်ရပ်သွားဟန်တူ တယ် ဝေးသွားသလိုခံစားရတယ်။
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ဘယ်လိုမှမခံစားတတ်ခဲ့တဲ့ ရိုက်မောင်းပုတ်မောင်းတွေ….အမွှေးအပျံ့ကြိုက်လွန်းတတ်တဲ့ ကျွန်တေ်ာ့အတွက် အညစ်ပတ်ဆုံးလုပ်ခိုင်းခဲ့တာတွေရဲ့ ခဏဝေးလိုက်ရချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက လျှို့ဝှက်စွာပဲကြိုက်နှစ်သက်နေခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ထွားကြိုင်းသန်မာသော သူ့ကွန်ချက်တွေအောက် ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့….ပြီးတော့ နည်းနည်းသာယာနေခဲ့ပါရဲ့လေ။ ကိုဇော် ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်နေတယ် လေးဘက်ထောက်နေသော ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်ခွရပ်နေရင်းပေါ့နော်။
`မင်း ကြိုက်တယ် မဟုတ်လား? လေသံတွေနားထောင်ရတာ အခြောက်ကြီးကျနေတာပဲ ဟာဟ….မင်းကို -ိုးဖို့အချိန်ရောက်ပီ….bitch’
သူ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုဖိပြီး ပခုံးတွေကိုအောက်နှိမ့် တင်ပါးတွေကိုအပေါ်အနည်းငယ်မြှင့်ပုံစံကိုပြောင်းနေခိုင်းပါတယ်။ နောက်တော့ တင်ပါး တစ်ဖက်စီကို ငါးချက်လောက် ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်တယ်…တကယ်နာတာ။ သူ့ရိုက်ချက်တွေခံရပြီးနောက် တင်ပါးတွေမီးလောင် နေသည့်အလား ခံစားရတယ် ပူထူနေတာပဲဗျာ။ သူ့ရယ်မောသံကတော့ ဆက်ပြီးကြားနေရတယ်။ အာ…..ပူနွေးနေတဲ့အရည်တွေ ကျွန်တော့်ကျောပြင်အနှံ့နဲ့အတူ တင်ပါးအကွဲကြောင်း ခရေ၀တလျောက်ကျဆင်းလာတာကိုခံစားရပါရဲ့။ စက္ကန့်မခြား အနံ့တစ်ခုရ လာတာဆိုတော့ သူ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ် အ၀ါရောင်အရည်တွေပန်းထုတ်ပြန်ပြီပဲဗျာ။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို သူ့လက်တွေနဲ့ ဖျစ်ညှစ်တာကိုခံစားရပါတယ်။ တစ်ဖက်ခြင်းစီကိုညှစ်လိုက် တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖြဲပြီး ခရေ၀ကိုကလိလိုက်နဲ့သူ့လက်တွေ ကလေ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ အားရပါးရကစားမှုနောက်မှာတော့ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ဖြဲလိုက်ပြီးနောက် ခပ်မာမာနဲ့နွေးနေသောအရာ တစ်ခု ခရေ၀စီဖိလာတာကိုခံစားရပါတယ်။အဲဒါပဲ…အဲဒါ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ဒင်ကြီးနဲ့-ိုးခံရပြီပေါ့။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေအရမ်းလှုပ်ရှားရ သလို နာကျင်မှုကိုလည်းခံစားရတာက ကွဲပြားတဲ့ဖီလင်တွေကို တစ်ပြိုင်တည်းခံစားရသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်းလေးကို သူသွင်းပြီး နောက် ခဏငြိမ်နေကာ မျက်လုံးမှာစည်းထားသော အ၀တ်ကိုသူဖယ်ရှားပစ်လိုက်ရော။
`မင်းကို-ိုးနေတုန်း မင်းမျက်နှာဘာဖြစ်နေလဲ ငါကြည့်ချင်တယ်´ ဟိုး….ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်က မှန်ချပ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရတယ် သူ -ိုးနေတုန်း ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ တကယ့်ရှင်းရှင်းကြီးလေ။ ကျွန်တေ်ာမြင်လိုက်ရတာက သူ့မျက်နှာမှာ တကယ့်ကြောက်စရာအပြုံး တစ်ခုပါပဲ။ အာ…..ကျွန်တော့်မျက်နှာကို သူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် သူ့ငပဲကြီးကို လျောကနဲ့ဆောင့်သွင်းလိုက်တယ်ဗျာ။ အား…..ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက နာကျင်မှုကြောင့် ခပ်ကျယ်ကျယ်ကိုအော်ပစ်လိုက်မိစဉ်မှာ သူ့ရယ်သံကိုကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။ သူ့ငပဲကို တစ်ချက်အဆုံးထိ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနောက် တစ်ဆုံးခပ်ပြင်းပြင်းပြန်ဆောင့်ထည့်တယ်….ကျွန်တော့်ကျောပြင်ထဲ ဖျဉ်းကနဲ ခံစားရပါရော။
အဆုံးစွန်နာကျင်မှုရဲ့နောက် တစ်ကိုယ်လုံးဘာဖြစ်သွားသလဲမသိ….ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ မြန်သောသူ့ဆောင့်သွင်းချက်တွေ ဆက်တိုက်လာချိန်မှာ မအော်မိတော့။ သူ့ငပဲကို ဆွဲထုတ်လိုက်ချိန် လျောကနဲ့ ပြန်သွင်းလိုက်ချိန်တိုင်း ကျွန်တော့်ခါးကိုတွန့်ပြီး အဝေးကိုရှောင်ဖို့ ကြိုးစားမိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့သူ့လက်အစုံက ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကိုဖိကိုင်ထားတယ်…..ဖျစ်ညှစ်ထားတယ်… နောက်တော့ ကျွန်တော့်ပခုံးအစုံကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့လှမ်းထိန်းပြီးကိုင်ကာ သူဆောင့်သွင်းလိုက်ချိန်တိုင်း နောက်ပြန်ဆောင့်ချက်ဖြစ် အောင်ဆွဲဆွဲယူတယ်လေ။ ကျွန်တော့်ကျောပြင်တလျှောက် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ပွတ်ဆွဲသလို ဂုတ်သားတွေကိုလည်း သူ တမက်တမော အနမ်းကြောရှည်ရဲ့။ အာ….ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေဟာ ထုံစပြုကာ နာကျင်မှုတွေအဝေးရောက်သွားပါပြီ။ အို…..ကိုဇော် ဆောင့်သွင်း ချက်တွေကို အရှိန်မြှင့်ပြန်တယ်….သာယာသွားချက်…ရှီး။
ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်စွာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ငြီးငြူသံတွေထွက်သွားရပါတယ်။ အဲ့လိုအသံတွေက ကိုဇော့်အတွက် အားဖြစ်စေသလား မသိပါဘူး သူ့ဆောင့်သွင်းချက်တွေက ပိုပြင်းလာသလို ပိုပြီးမြန်လာတယ်ဗျ။ `နာကျင်မှုရဲ့အစွန်သာယာမှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ´ ဒါများလား မသိဘူးဗျာ ကျွန်တော် တကယ်သာယာမိတယ်။ အေးစက်စက်ကြမ်းပြင်နှင့် ချုပ်နှောင်ထားတဲ့သူ့အကြားလွင့်မျောနေခြင်း ပါပဲ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက မိန်းမညည်းညူသံတွေ ဆက်ထွက်နေမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲခမျာလည်း သူ့ဆောင့်သွင်းချက်တွေမှာ ကြမ်းပြင်နဲ့ ပွတ်သပ်ထိတွေ့ရတယ် တစ်ချက် တစ်ချက်။ မကြာခင်မှာပဲ ကြမ်းပြင်အနှံ့ ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေ ရွှဲသွားပါပြီ။ သူ ကျွန်တော် ဇာတ်လမ်းဆုံးသွားပြီဆိုတာ သိသွားသလို သူသည်လည်းအဆုံးသတ်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာကို ကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်။ သူ့-ိုးချက် ဆောင့်သွင်းချက်တွေဟာ ခပ်ပြင်းပြင်းခပ်မြန်မြန်ဖြစ်ရင်း သူ့ကျောပြင်က တစ်ချက်တစ်ချက်တွန့်တွန့်သွားပြီးနောက် သူ့ နှုတ်ဖျားက အော်ညည်းလိုက်သံကိုကြားရပါပြီ။ နွေးကနဲ နွေးကနဲ ကျွန်တော့ခရေ၀အတွင်းမှာ သူ့သုက်ရည်တွေကိုဖြည့်ပစ်လိုက်တယ်။ သူ တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တော့ ဆက်ပြီးလှုပ်ရှားနေပြီးနောက် ကျွန်တော့်ကျောပြင်ပေါ်ကိုမှောက်ပြီး မှီချလိုက်တယ် နှစ်ဦးသား ကြမ်းပြင်ပေါ်ဝယ်ထပ်လျက်ပေါ့နော်။
ကြမ်းပြင်ကသူ့ရဲ့အ၀ါရောင်အရည်တွေကလည်း အခုတော့အေးစက်လို့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးကြားဝယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက်အကြာစိမ်နေပြီးမှ သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကာ မတ်တပ်သူရပ်လိုက်တယ်။ အ၀ါရောင်အရည် တွေနဲ့ အပန်းခံရတယ်….လက်ကိုချည်နှောင်ခံရတယ်…..အရိုက်အနှက်ခံရတယ်….ပြီးတော့ အ-ိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ် ခံစားပြီး ခဏတော့ ဆက်လှဲနေဖြစ်ဦးမယ်ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ဖာသာတွေးမိရပါရဲ့။
ကိုဇော် ကျွန်တော့်လက်ကချည်နှောင်ထားတဲ့ အ၀တ်ကြိုးရှည်ခပ်တင်းတင်းကိုဖြေပေးပြီး ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ငပဲက စိုစွတ်နေဆဲ သူ့သုက်ရည်တွေကို သန့်ရှင်းသွားအောင် လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရော။ ကျွန်တော်သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ လျာဖျားလေးနဲ့ရစ်သိုင်းစုပ်ပြုလိုက်တယ်။ သူ့သုက်ရည်ရဲ့အရသာက ချိုမြနေတော့ နောက်ဆုံးတစ်စက်လောက်ကျန်တဲ့အထိ ကျွန်တော် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်တယ် လျှာနဲ့လေ။ သူ့ငပဲ တဖြည်းဖြည်းပျော့သွားချိန်မှ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲကနေ စွဲထုတ်လိုက် ကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းများကို သူ့နှုတ်ခမ်းခပ်ထူထူများဖြင့် မွတ်သိပ်စွာ အချိန်အတော်ကြာအနမ်းပေးတယ်။ နောက်တော့ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ငပဲဆီကိုရောက်ရှိလာပြီး ပွတ်သပ်သန့်ရှင်းလိုက်တယ်…..ပြီးတော့…ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုမတ်တပ်ရပ်စေ ကာ သူ့ပါးစပ်ထဲကို ကျွန်တေ်ာ့ငပဲကိုထည့်သွင်းမျိုချပါရော…အာ….ပူနွေးပြီး အတွင်းထဲထိ လျောကနဲကျသွားသလိုပဲ သူ့လုပ်ဆောင် ချက်က ကျွမ်းချက်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းက မိန်းမောကျေနပ်သံထပ်ထွက်လာရတာပေါ့လေ။
Alex Aung (2 July 2014)
Note: ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်သိပ်မပါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတို့အပျင်းပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုလိင်ဆက်ဆံမှုမျိုးကြိုက်နှစ်သက်သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ သိချင်ပါရဲ့။ရှိတယ်ဆိုရင် Comment ရေးခဲ့နော်။